अंग्रेजी शब्दकोशको सबैभन्दा लामो शब्द, जसलाई पढ्न मात्रै लाग्छ साढे ३ घण्टा! - Everest Dainik - News from Nepal
अंग्रेजी शब्दकोशको सबैभन्दा लामो शब्द, जसलाई पढ्न मात्रै लाग्छ साढे ३ घण्टा!
एजेन्सीः सामान्यतया हामीलाई झट्ट हेर्दा Czechoslovakia (चेकोस्लोवाकिया) जस्ता अंग्रेजी शब्द उच्चारण गर्न कठिन हुन्छ । यस्तैमा एक अंग्रेजी शब्द यस्तो छ जसलाई पढ्न मात्र ३ साढे ३ घन्टाको समय लाग्छ! त्यो कुन शब्द हो जसलाई पढ्न मात्र यतिका धेरै समय निकाल्नु पर्छ?आउनुहोस् संगै बसेर पढौं ।
तपाई सुनेर अचम्ममा पर्नुहुन्छ होला । अंग्रेजीको सबैभन्दा लामो याे १ लाख ८९ हजार ८ सय १९ अक्षरले बनेको छ । जसलाई शुद्ध उच्चारण गर्छु भनेर लाग्यो भने मात्र साढे तिन घन्टाको समय कतिबेला बित्छ थाहा हुँदैन। यो शब्द मानव शरीरमा पाइने टिटीन नामक एक प्रोटिनको रासायनिक नाम हो।
बैज्ञानिकका अनुसार मानव शरीरमा २० लाख भन्दा बढी प्रोटिन हुन्छ जुन ओमिनो एसिडले बनेको हुन्छ। मानव शरीरमा टिटीन नै सबैभन्दा लामो प्रोटिन हो जुन २६ हजार भन्दा बढी ओमिनो एसिडले बनेको हुन्छ। पहिले टिटीनको रासायनिक नामलाई शब्दकोशमा नै राखिएको थियो तर पढ्न निकै मुस्किल हुने भएपछि यसलाई शब्दकोशबाट हटाई टिटीन नामले नै चिन्ने गरिन्छ।
टिटीन प्रोटिनको खोज सर्वप्रथम रेजी नटोरीले सन् १९५४ मा गरेका हुन्। यस पश्चात सन् १९७७ मा कोस्सक मरुयामा र उनका सहकर्मीले यसको खोज अनुसन्धान गरि कोन्नेक्टिन नाम राखेका थिए। फेरी त्यसको करिब २ बर्ष पछि कुआन वांग र उनका सहकर्मी मिलेर यस प्रोटिनको खोज अनुसन्धान गरि ‘टिटिन’ नाम राखेका हुन्।
ट्याग्स: अंग्रेजी शब्दकोश